Blue withasuggesti - 英语 - 缅甸语 翻译和实例
您搜索了: blue withasuggestion of grey (英语 - 缅甸语)
နောက်ပြီး ဖျားလည်း ဖျားနေတယ်
ရေးဆွဲကိရိယာ တခုနဲ့ မှတ်သားပါ
Save this image withadifferent name
ဒီရုပ်ပုံကို အခြား အမည်တမျိုးနဲ့ သိမ်းဆည်းပါ
တစ်ခြားနာမည်ဖြင့် လက်ရှိဖိုင်ကို သိမ်းဆည်း
သင်တို့သည် အဘိုးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူ ဖြစ်၍၊ လူထံ၌ အလိုအလျောက်ကျွန်မခံကြနှင့်။
ကြွေးကြော်ခြင်းအသံနှင့် ဘုရားသခင် တက်တော်မူ၏။ တံပိုးမှုတ်ခြင်းအသံနှင့် ထာဝရဘုရား တက်တော်မူ၏။
Please replace the disc withawritable DVD.
ဒေတာရိုက်ယူနိုင်သည့် ဒီဗီဒီ နှင့်အစားထိုးပါ
Please replace the disc withawritable CD.
ဒေတာရိုက်ယူနိုင်သည့် စီဒီ နှင့်အစားထိုးပါ
ရေသည် ကျောက်ခဲကဲ့သို့ဖြစ်၍ ပင်လယ် မျက်နှာတင်းမာလျက် ရှိ၏။
Split track in parts withafixed length
သန့်စင်သော ပုဝါဖြင့် ခြောက်သွေ့အောင် သုတ်ပါ သို့မဟုတ် လေသလပ်ပြီး အခြောက်ခံပါ။
Please replace the disc withawritable CD or DVD.
Please replace the disc withawritable DVD with at least %i MiB of free space.
ဒေတာရှိသည့် ရိုက်ကူးနိုင်သော ခွေနှင်အစားထိုးပါ
Please replace the disc withawritable CD with at least %i MiB of free space.
ပျင်းရိသောသူသည် ဆင်းရဲခြင်း၊ လုံ့လဝိရိယ ရှိသောသူသည် ကြွယ်ဝခြင်းသို့ ရောက်တတ်၏။
shopping करने आयी हु । (印地语>英语)sure synonym (他加禄语>英语)famulus omnis (拉丁语>英语)너무 바보 보고싶어요 (韩语>英语)ang layo mo eh (他加禄语>英语)mio tu suo nostro (意大利语>英语)sim ko hindi mein kya kehte hai (印地语>英语)dominus pascit me nihil mihi deerit (拉丁语>英语)recuerda quien eres (西班牙语>拉丁语)mahirap magtiwala sa ngayon (他加禄语>英语)non farti rubare la speranza (意大利语>英语)hone wale husband ko kya kahate hai english me (印地语>英语)bump into3trains (英语>意大利语)amabo te (拉丁语>英语)timely (英语>意大利语)бочки (乌克兰语>俄语)rymden (瑞典语>立陶宛语)badal meaning in kannada (印地语>卡纳达语)bahut vadia (印地语>英语)ano ang twag sa maliit na palaka (他加禄语>英语)sorry sir i couldn't able to attend your call (英语>泰米尔语)கை அடி (泰米尔语>马来语)your suchacoward (英语>他加禄语)bukas,luluhod ang mga tala (他加禄语>英语)aapne khana khaya kya (印地语>英语)